तपाईका लागि कस्तो छ आजको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
तपाईका लागि कस्तो छ आजको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
कुरा भन्दा काममा जोड दिनु होला । अरुको कुराको भरमा मात्रै काम नगर्नु होला । शारीरिक एवं मानसिक रुपमा काम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । पढाई लेखाईमा थोरै ध्यान जानेछ । व्यापार व्यवसायमा सामान्य सुधार आउनेछ । अनावस्यक खर्चमा कमि आउनेछ । आफन्तबाट सहयोग सहानुभुति मिल्नेछ । आतिथ्यता ग्रहणको निम्तो आउनेछ ।
अस्थिरता बढ्नेछ । कार्य लनगशिलता घट्दा उपलब्धि घट्नेछ । पिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । माया दया गर्ने कोहि हुने छैन । फजुल खर्चमा वृद्धि हुनेछ । दुर्जनहरुले पिछा गर्ने छन् । व्यापारमा गरेको लगानी डुब्न सक्छ । परिश्रमको मुल्य लिन ठुलै कसरत गर्नु पर्नेछ । आस्था र विश्वासमा चोट लाग्न सक्छ । जोखिम नउठाउनु होला ।
मान्यजनको सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रै हुनेछ । घर परिवारमा सुख,शान्ति मिल्नेछ । प्रयत्न गरेमा बक्यौता रकम उठ्नेछ । पुराना मित्रहरु भेटिने छन् । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । घरमा मांगलिक काम हुनेछन् । मिलेर काम नगर्नु होला ।
दुर्जनहरु आफै पाखा लाग्ने छन् । असहज परिस्थितिको सामना हुनेछ । रोकिएका कामले गति लिनेछ । कर्म प्रप्तिको योग देखिन्छ । नोकरी तथा राजनीतिमा भूमिकाको खोजी हुनेछ । गुमेको आस्था र विश्वास पलाउनेछ । कार्य क्षमता बढ्नेछ । सहयोगी मन भेटिने छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्नेछ । स्वागत सत्कार मिल्नेछ ।
समयमा आँशिक सुधार आउनेछ । आन्तरिक भन्दा बाह्य काम बढि हुनेछन् जसका कारण आफ्ना उपलब्धिका काम ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । आशा र भरोसामा काम गर्दा पछि परिनेछ । घर डेराको समस्या पर्न सक्छ । पढाईमा लेखाईमा रुची बढ्नेछ । धार्मिक क्रियाकलपमा सक्रियता बढ्नेछ । फलदायी यात्राको सम्भावना देखिन्छ ।
हेलचक्र्याई नगर्नु होला,सोच विचार काम गर्नु होला दिन प्रतिकुल छ । आशा र भरोसा निराशामा परिणत हुने सम्भावना बढि देखिन्छ । काम गर्ने वातावरण भत्किने छ । दुष्टहरुको सक्रियता बढ्नेछ । दैनिका काममा समस्या आउनेछ । मानसिक तनाव बढ्नेछ । खानपान नमिल्दा स्वास्थ्य कमजोर हुनेछ । लगानी नबढाउनु होला ।
दिन सामान्य अनुकुल देखिन्छ । हेलचक्र्याई नगरि काम गर्नु होला सपनाले साकार रुप लिनेछ । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । पुराना समस्या समाधान हुनेछन् । दैनिका काममा प्रगति हुनेछ । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ । दामपत्य जीवनमा सुखानुभूति हुनेछ ।
आफ्नो काममा आफै लाग्नु होला । संघर्षबाट मात्र लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ । शत्रुहरुले सहज रुपमा काम हुन दिने छैनन । प्रतिश्पर्धाबाट पछि नहट्नु होला अन्तिम परिणाम सुखद निस्कनेछ । व्यापार व्यवसायमा क्रमिक सुधार आउनेछ । ऋणमा काम नगर्नु होला । मुद्धा मामिलामा जीत हुनेछ । स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला ।
भ्रम उत्पन्न हुनसक्छ । प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नु होला । यदि समयमा निर्णय लिन सकिएन भने उपलब्धिका काम पछाडि धकेलिने छन् । आर्थिक कारोवारमा चनाखो रहनुहोला । इच्छा शक्ति बढाउनु पर्ने देखिन्छ । आफन्त पराई जस्ता हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट अल्प लाभ हुनेछ । अन्य काममा आँशिक सफलता मिल्नेछ ।
शारीरिक एवं मानसिक रुपमा कमजोर महशुस हुनेछ । भावनामा बगेर कुनै काम नगर्नु होला लक्ष्यमा पुग्न सकिने छैन । धन खर्च गरेर अरुलाई आफ्नो बनाउनुको कुनै अर्थ रहने छैन । विवादबाट टाढा बसेर काम गर्नु होला । झुट्टा कुराले सताउनेछ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । संचित धन घट्नेछ । विसाउने चौतारी मिल्ने छैन ।
काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । उपकारका काममा धन खर्च हुनेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । घर परिवार,साथी भाइबाट सहयोग मिल्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा भूमिकाको खोजी हुनेछ । संचित धन बढ्नेछ । ज्ञान गुनका कुरा हुनेछन् ।
विश्वासमा लिएर काम गर्न सकिने छैन । कुरा भन्दा काममा जोड दिनु होला । कारोवारमा चनाखो रहनुहोला । वोलीको प्रभाव थोरै पर्नेछ । प्रयत्नहरु सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट मुनाफा कम हुनेछ । पढाई लेखाईमा सामान्य प्रगति हुनेछ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा एक पटक सोचेर गर्नु होला । नोकरीबाट सन्तुष्टि मिल्ने छैन ।